Ọnụ Ahịa Ọnụ Ahịa Ọnụ, Ọnụ Mmiri Na-edoghị Ọnụ Nzọụkwụ Ọnụ Ụzọ, Ọnụ Mmiri Na-edoghị Mkpụrụ Ịgba Mpempe Ime Obodo na ndị na-edozi na China
Nkọwa:Ọnụ Ụzọ Ákwá Ngwácha,Ọnụ Ụzọ Igwe Mmiri Na-adịghị Egosi Ọnụ,Ọnụ Ụzọ Igwe Ngwá Ọrụ Ime Ala na-anaghị edo edo,Ọnụ Ụzọ Ntugharị Na-ekpuchi Ọnụ Mmiri,,
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Ákwá Ngwácha
Ngwaahịa nke Ọnụ Ụzọ Ákwá Ngwácha , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọnụ Ụzọ Ákwá Ngwácha , Ọnụ Ụzọ Igwe Mmiri Na-adịghị Egosi Ọnụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ọnụ Ụzọ Igwe Ngwá Ọrụ Ime Ala na-anaghị edo edo R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ulo onu a na-achogharighi aka n'oru a na-achikota oru  Kpọtụrụ ugbu a
Automatic Electric Trackless Electric Retractable Gate  Kpọtụrụ ugbu a
Eletriki nke nwere ike ịgbanwụrụ ya na Ọnụ Ụzọ Ntugharị Abụọ  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Ámá Ntugharị Na-agba Nchara Eletrik  Kpọtụrụ ugbu a
Ulo onu a na-achogharighi aka n'oru a na-achikota oru Ụlọ ọrụ eletriki na- arụ ọrụ bụ ụzọ nwere ike ịkwaga ma gbanwee onwe ya iji chịkwaa ọnụ ụzọ meghere ụzọ iji chịkwaa ntanetịtị na ntọhapụ nke ndị na-eme njem ma ọ bụ ugbo. Ọnụ ụzọ telescopic...
Ọnụ Ụzọ Ámá Ntugharị Na-agba Nchara Eletrik Ugbo ala eletriki elekere elekere nke abuo bu uzo kpochapu nke ulo oru, ihe di mfe ma mara mma, uzo ozo jiri 38 × 25 (1mm thick) tubing tube site na mpempe puru iche, okpukpu osisi okpukpu abuo ya na...
China Ọnụ Ụzọ Ákwá Ngwácha Ngwa
Àgwà na Uru
(1) Atụmatụ ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi: nke nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche ma ọ bụ nke ọzọ dị ka ọnụọgụ ụzọ;
(2) Mkpu ụda: Egwú ụda pụrụ iche, ntinye mpempe, mgbochi na nkwụsị.
(3) Ọrụ mgbochi mgbochi: na-akpaghị aka mgbe mgbochi nzukọ;
(4) Mkpuchi igwe mgbagwoju anya: moto ga-agbụ mgbe a ga-emeghe ọnụ ụzọ ahụ (nke a na-achịkwa site na ntanetị ma ọ bụ gbanwee)
(5) Ike siri ike: ọnụ ụzọ mechiri emechi mgbe emechiri, ike ọkụ dịka 10W n'okpuru njikere;
(6) Mkpụrụ osisi na-enweghị nkuzi (36V, 100W) nwere ike ịnweta ụzọ dị arọ dị arọ;
(7) Ọnụ ụzọ na-emechi ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ: otu n'ime ụzọ ahụ na-ahapụ mgbe niile;
(8) Ihe mmetụta nchekwa dị egwu: ihe mmetụta na-akwụsị ịrụ ọrụ mgbe ọnụ ụzọ mechiri;
(9) Nkà na ụzụ mkpuchi dị iche iche: ọ dịghị nchara;
(10) Ọ dị mfe ma dị mfe ịwụnye;
(11) Na-arụ ọrụ: mgbe akwukwo akwukwo mechiri ebe ziri ezi, akwukwo akwukwo ga-agafe na uzo onu na ala. Akwukwo nke di n'akụkụ anọ nke akwukwo akwukwo ga - ejikota ya na onu ozo na ala, nke na - eme ka ikuku ikuku. Mgbe ọnụ ụzọ mepere emepe, rubbers ga-ekewapụ site n'okporo ụzọ na ala, nke na-ezere mkpịsị aka na ala.
(1) Teknụzụ na-ejikọta ihe ntanetị na teepu na okporo ígwè nke okporo ígwè na-eme ka ọnụ ụzọ mechie kpamkpam mgbe ọnụ ụzọ mechiri;
(2) Ụlọ ọrụ pụrụ iche nke ụlọ ọrụ. Ugwu elu ihe omimi nke di n'elu ala ya na uzo uzo V n'obere akwukwo akwukwo, nke na-egbochi onu ogugu ma gbanye na o na-eme ka o di nwayo ma di ire;
(3) Anụ ahụ a na-ahụ anya ma ọ bụ nchara anụ ahụ, na n'etiti na n'akụkụ abụọ ya na ọnyá akara iji hụ na mmetụta nke hermetic.
(4) Mgbanwe ụda ụda ụda na-etinye iji zere contagion;
Ọnụ Ụzọ Ákwá Ngwácha Ọnụ Ụzọ Igwe Mmiri Na-adịghị Egosi Ọnụ Ọnụ Ụzọ Igwe Ngwá Ọrụ Ime Ala na-anaghị edo edo Ọnụ Ụzọ Ntugharị Na-ekpuchi Ọnụ Mmiri Ọnụ Ụzọ Ámá Ngwá Ngwácha